हाइड्रोजन बमले कसरी गर्छ काम ?
हाइड्रोजन बम हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली बम हो । यो अन्य परमाणु बमभन्दा सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ ।
यो अन्य हतियारभन्दा कसरी फरक छ ? हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण भएपछि अमेरिका र जापानले विश्वका लागि खतराको घण्टी बजेको बताएका छन् ।
हाइड्रोजन बलमे कसरी गर्छ काम ?
उत्तर कोरियाद्वारा सफल परीक्षण गरिएपछि हाइड्रोजन बमको विश्वभर चर्चा रहेको थियो ।
–यो बम परमाणु बमभन्दा विकसित र शक्तिशाली थर्मोन्यक्लियर हतियार हो ।
–पुराना परमाणु हतियार विखंडनको क्रियामा आधारित रहेका हुन्थे, जसमा परमाणु केही भागमा विभक्त भएर उर्जा उत्पन्न गर्छन् । हिरोसिमा र नागासाकीमा पनि यस्तै बम खसालिएको थियो ।
–थर्मोन्युक्लिएर एच–बम मा बिखंडन र संकलन दुई क्रिया हुन्छन् । यो ज्यादा रुपमा उर्जा उत्पन्न हुन्छ । अर्थात् एक समयमा नै हाइड्रोजनको परमाण्ुा विभक्त हुन्छन् र जोडिन्छन् पनि ।
–हाइड्रोजन बममा दुई खाले प्रक्रिया एकपटक चल्छन् । सुरुमा परमाणु विखण्डन हुन्छन् । यस पश्चात संकलनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो ठीक त्यही प्रक्रिया हो, जस्तै सुर्यको विस्फोटका दौरान उर्जा उत्पन्न हुन्छ ।
–प्लुटेनियम भरिएको पहिलो भाग विस्फोटको सुरुवात हुन्छ । यसपश्चात विखंण्डनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
–यसपश्चात पछाडिबाट बिस्फोटमा संकलन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यही दौरान युरेनियमबाट भरिएको दोस्रो भागमा विखण्डनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
–दोस्रो चरणमा यो प्रक्रिया पुर्ण रुपमा विस्फोट हुन सुरु हुन्छ । यसमा अध्याधिक मात्रामा उर्जा उत्पन्न हुन्छ ।
हाइड्रोजन बमले परमाणु बमभन्दा धेरै विनाश गर्नसक्छ
– मिडिया रिपोर्टमा अनुसार उत्तर कोरियाले जति शक्तिशाली हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेको छ त्यसबाट एक करोड टन इनर्जी पैदा हुन्छ ।
– जब हिरोशिमामा एटोमिक बम खसालिएको थियो तब जम्मा १५ हजार टन इनर्जी निक्लिएको थियो । उत्तर कोरियाको यो शक्तिशाली हाइड्रोजन बलमे ठुलो नोक्सानी पुर्याउनेमा कुनै संका छैन । हिरोशिमामा खसालिएको बममा परी ९० हजारदेखि १.४ लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको बताइन्छ ।
भारतबाट आएका एक बालकको आइसोलेसनमा मृत्यु
बाजुरा । बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीस्थित आइसोलेसन एक बालकको मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान बुढिगंगा नगरपालिका १ का दुई वर्षीय बालकको हृत्यु भएको हो । उक्त बालक आठ दिनअघि उनी आमा बुवासँग भारतबाट आएका थिए।